Akụkọ Bible: A Tụọ Stivin Nkume - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
NWOKE nke gburu ikpere n’ala ebe a bụ Stivin. Ọ bụ ezigbo onye na-eso ụzọ Jizọs. Ma lee ihe na-eme ya ugbu a! Ndị ikom a na-atụ ya nkume. Gịnị mere ha ji kpọọ Stivin asị nke ukwuu ruo n’ókè nke ime ya ihe a jọgburu onwe ya? Ka anyị hụ.
Chineke anọwo na-enyere Stivin aka ịrụ ọrụ ebube dị iche iche. Nke a adịghị ndị ikom a mma, ha na ya wee malite ịrụrịta ụka banyere nkụzi ọ na-akụziri ndị mmadụ eziokwu. Ma Chineke nyere Stivin amamihe dị ukwuu, o wee gosi na ndị ikom ahụ anọwo na-ezi ozizi ụgha. Nke a were ha iwe karị. N’ihi ya, ha jidere ya wee kpọọ ndị mmadụ ka ha boo ya ebubo ụgha dị iche iche.
Onyeisi nchụàjà wee jụọ Stivin, sị: ‘Ihe ndị a hà bụ eziokwu?’ Stivin zara site n’ikwu okwu ọma sitere na Bible. Mgbe ọ na-emechi okwu ya, ọ kọrọ otú ndị ajọ mmadụ si kpọọ ndị amụma Jehova asị n’oge gara aga. O wee sị ha: ‘Unu yiri ajọ ndị ahụ. Unu gburu ohu Chineke bụ́ Jizọs, unu adịghịkwa erube isi n’iwu Chineke.’
Nke a mere ka ezigbo iwe wee ndị ndú okpukpe ahụ! Ha tara ikikere ezé n’oké iwe. Ma Stivin weliri isi ya elu, sị: ‘Lee! Ana m ahụ Jizọs ka ọ na-eguzo n’aka nri Chineke n’eluigwe.’ Mgbe o kwuru nke a, ha kpuchiri aka ná ntị ha ma wakwuru Stivin. Ha jidere ya, kpụpụ ya n’azụ obodo.
N’ebe a, ha yipụrụ uwe elu ha, were ha nye nwa okorobịa bụ́ Sọl ka o jide. Ị̀ na-ahụ Sọl? Mgbe ahụ, ụfọdụ ndị ikom ahụ malitere ịtụ Stivin nkume. Stivin wee gbuo ikpere n’ala dị ka ị pụrụ ịhụ, wee kpegara Chineke ekpere, na-asị: ‘Jehova, enyela ha ahụhụ n’ihi ihe ọjọọ nke a.’ Ọ maara na ndị ndú okpukpe eduhiewo ụfọdụ n’ime ha ime nke a. Mgbe nke a gasịrị, Stivin nwụrụ.
Mgbe mmadụ mere gị ihe ọjọọ, ị̀ na-anwa imegwara, ma ọ bụ na-arịọ Chineke ka o megwata ha? Ọ bụghị ihe Stivin ma ọ bụ Jizọs mere. Ha nwere obiọma ọbụna n’ebe ndị kpọrọ ha asị nọ. Ka anyị na-agbalị iṅomi ihe nlereanya ha.
Ọrụ 6:8-15; 7:1-60.
Ònye bụ Stivin, gịnịkwa ka Chineke nọworo na-enyere ya aka ime?
Gịnị ka Stivin kwuru bụ́ nke were ndị ndú okpukpe iwe nke ukwuu?
Mgbe ndị ikom ahụ kpụpụrụ Stivin n’azụ obodo, gịnị ka ha mere ya?
Na foto a, ònye bụ nwa okorobịa ahụ guzo n’akụkụ uwe ndị ahụ?
Tupu ya anwụọ, gịnị ka Stivin gwara Jehova n’ekpere?
Iji ṅomie Stivin, gịnị ka anyị kwesịrị ime mgbe mmadụ mere anyị ihe ọjọọ?
Gụọ Ọrụ Ndịozi 6:8-15.
Olee ụzọ aghụghọ ndị ndị ndú okpukpe jiworo mee ihe iji gbalịa ịkwụsị ọrụ nkwusa nke Ndịàmà Jehova na-arụ? (Ọrụ 6:9, 11, 13)
Gụọ Ọrụ Ndịozi 7:1-60.
Gịnị nyeere Stivin aka ịgbachitere ozi ọma ahụ n’ụzọ dị irè n’ihu ndị Sanhedrin, gịnịkwa ka anyị pụrụ ịmụta site n’ihe nlereanya ya? (Ọrụ 7:51-53; Rom 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Pita 3:15)
Olee àgwà anyị kwesịrị igosipụta n’ebe ndị na-emegide ọrụ anyị nọ? (Ọrụ 7:58-60; Mat. 5:44; Luk 23:33, 34)